musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Volkswagen itsva yeFashoni neMitambo, Chinese Style
MunaGunyana 2021, China Mass Production Car Performance Competition (inozonzi CCPC), inotambirwa neAutoCulture, yakasvika pakupera muLianyungang City, Jiangsu Province. Pakati pavo, iyo FAW-Volkswagen Audi A3L, imwe yemhando nhatu dzakanakisa dzemhuri yeGerman, yahwina nzvimbo yekutanga mukudzivirira ruzha uye zvidzidzo zvekudzikisa ruzha nekuita kwayo kwakanaka kwechigadzirwa. Iri zvakare mumakwikwi akazara ekuita uye elk bvunzo zvidzidzo. Vese vakahwina mukwikwidzi uye vakabudirira kuhwina zita re "Triple Crown" muchiteshi chehunyanzvi.
Audi, semumwe wevatatu veGerman masters, yagara iri sarudzo yekuda kwevatengi. Nechitarisiko chayo chemhando yepamusoro uye ine simba uye yakavimbika kutonga kwesimba, yakakwezva kufarirwa nevechidiki vazhinji. Zvisinei, mukuona kwevanhu vakawanda, Audi yakanzi "umbozha", "inodhura", uye "isingasviki". Ndizvo zvazviri chaizvo here? Muchokwadi, kune akawanda Audi akateedzana modhi muChina nhasi, ivo vanosimudzira yakanakisa chigadzirwa kuita, asi mutengo unosvikika. Semuenzaniso, iyo Audi A3L yatichataura nezvayo nhasi, sechinhu chikuru chekutengesa kwemhuri yeAudi, haungatarisiri kukwanisa kuitenga nemutengo we180,000 yuan. Kumota yakashamisa kudaro.
Mafashoni nemitambo zvinogara, sarudzo yekutanga kune vechidiki
Mumusika wevatengi vemotokari unogara vechidiki, kuva nechitarisiko chepamusoro-soro zvinoreva kutanga kwekubudirira. Pfungwa yemamiriro ekunze uye fashoni yave yakakosha ruzivo ruzivo rwekusarudza kwavo kutenga mota. Panyaya iyi, seyemhando yepamusoro yeFAW-Volkswagen Audi, FAW-Volkswagen Audi A3L inogona kutaurwa kuti inobata zvakasimba mafungiro evatengi.
Mota iyi yanga yakavakirwa padingindira rekuti “fashion dhizaini” kubva payakavambwa, ichishandisa mutauro wazvino wefashoni wemhuri yeAudi RS. Kutarisa kubva kumberi, iyo iconic yekare hexagonal air intake grille yemhuri yeRS, ine dema yehuchi chrome kushongedzwa, inosimbisa iyo exquisiteness uye mhepo; iyo mhepo inopinza inotenderedza mativi ese ebhampa yekumberi uye inopinza-yakaita semwenje ye LED inobatana. Iko kushushikana kwekuona kunoburitswa kusvika pamwero mukuru, uye haina kurasikirwa nezita reAudi's "light factory"; mitsara yemativi emuviri inopinza uye izere nekunzwa kwemitambo, kubva kumashure ekumashure kusvika kune-mhando yakapinza chiuno ichienda kune mwenje wepamusoro, kuitira kuti motokari yose Iite senge inopa swooping inoratidzika kunaka uye pfungwa yekunatsiridza. Pakati pemhando dzeyero imwe chete, iyo FAW-Volkswagen Audi A3L inogona kunzi inomiririra iyo yepamusoro yechitarisiko uye inonyanya kukodzera vatengi vanoteedzera fashoni yevechidiki uye zvemitambo.
Yakanyanya kunatswa uye yakasununguka, ichiita kuti Audi A3L ive yepedyo
Sezvo chirevo chichienda, maitiro ekunze akagadzirirwa kuti vamwe vaone, uye mukati ndiyo nharaunda inokuperekedza iwe kwenguva yakareba kwazvo. Kunyanya mumotokari yemhuri compact, inofanirwa kukwanisa kupa ine hanya uye yakagadzika kutyaira nharaunda muhupenyu hwezuva nezuva isati yafarirwa nevatengi. Iyi zvakare inotengesa kwenguva refu FAW-Volkswagen Audi A3L pamusika wemotokari yemhuri. chimwe chezvikonzero.
Kuti zvive zvakanyanya kuenderana nekumisikidzwa kwemotokari yemhuri, iyo FAW-Volkswagen Audi A3L wheelbase yakarebeswa ne50mm, kuitira kuti risave dambudziko kuti mutsetse wechipiri wevafambi utsvedze makumbo avo. Pahwaro hwemafonti kurongeka, nekuchenjera kushandiswa kwekukanganisa, akakwira uye akaderera mafomu kuratidza runako rweindasitiri yemazuva ano, uyezve akapetwa maviri emhando yepamusoro masikirini makuru, chrome kushongedzwa uye yakafanana mhepo yekubuda maitiro seUrus, iyo yemukati inonatswa. . Zvinogona kunzi kubhawa.
Ndiani akati compact sedan haigone kutevera gallop uye chido?
Mazhinji emota dzemhuri dzakasimba dzinoteedzera kunyaradzwa uye kutakurika, asi kazhinji kufuratira chimiro chekuita uye haigone kupa mutyairi ruzivo rwekutyaira kwekumhanya. Mukuona kwechizvarwa chiduku chevatengi, izvi hazvibvumirwi zvachose. Kana iwe uchida kutsvaga kunakidzwa kwekumhanya uye kuda nekumisikidzwa kwekombuta sedan, pamwe iyo FAW-Volkswagen Audi A3L yakakodzera.
Kunyangwe iyo FAW-Volkswagen Audi A3L yakamisikidzwa semotokari yemhuri, uye EA211 1.4T injini + 7-speed dual-clutch gearbox yakashongedzerwa isina chekutaura maererano nemaparamita, inogona kupa torque yepamusoro ye250N·m. uye simba guru re110KW. Inogona kuzadzisa zvizere zvinodiwa zvekushanda kwekutyaira kwezuva nezuva kwevechidiki. Zvakare, FAW-Volkswagen Audi A3L ine zvakare yakaderera nzvimbo yegiravhiti, yakareruka isina kuvhuvhuta misa uye zvine mwero yakaomesesa chassis kumiswa, iyo inounza yayo chassis kubata kwayo kusvika padanho repamusoro, vhiri rinonongedza zvakanyanya, uye vhiri rekumashure rinomhanya kana mota yatendeuka. zvakapinza. Iyo traceability zvakare yakanyanya kurongeka, nekunyanya kutyaira mafaro!
Izvo zvinongoitika kuti iyo FAW-Volkswagen Audi A3L yakapinda mumakwikwi e2021 CCPC yeruzhinji chiteshi panguva ino. Iine emhando yepamusoro simba rekubuda uye ine simba chassis tuning, inogona kupa mutyairi mafaro ekumhanya kungave kuri kutanga kukwirisa kana kukona. Naizvozvo, kana iwe uchida kukwanisa kumhanyisa kumhanya uye kunakidzwa nekunakidzwa kwekutyaira uchigutsa kufamba kwemazuva ese, FAW-Volkswagen Audi A3L ndiyo sarudzo yako yakakwana.
Kazhinji, iyo FAW-Volkswagen Audi A3L ine yakanakisa mhando isingabatwe nemota dzakafanana mune zvakawanda zvinhu. Kutaridzika kwayo kwepamusoro, kunyaradza uye kuita kwakasimba kwakafanana nazvo, uye uku ndiko kugona kwayo kutungamira mumunda we sedan yemumba. Chikonzero ndechekuti mota iyi ichafarirwawo nevanhu vakawanda.
Mota iyi yanga yakavakirwa padingindira rekuti “fashoni dhizaini” kubvira payakavambwa, ichishandisa mutauro wazvino wefashoni wemhuri yeAudi RS. Kutarisa kubva kumberi, iyo iconic yekare hexagonal air intake grille yemhuri yeRS, ine dema yehuchi chrome kushongedzwa, inosimbisa iyo exquisiteness uye mhepo; iyo mhepo inopinza inotenderedza mativi ese ebhampa yekumberi uye inopinza-yakaita semwenje ye LED inobatana. Iko kushushikana kwekuona kunoburitswa kusvika pamwero mukuru, uye haina kurasikirwa nezita reAudi's "light factory"; mitsara yemativi emuviri inopinza uye izere nekunzwa kwemitambo, kubva kumashure ekumashure kusvika kune-mhando yakapinza waistline inosvika kune magetsi epamusoro kuitira kuti motokari yose Iite senge inopa swooping inoratidzika kunaka uye pfungwa yekunatsiridza. Pakati pemhando dzeyero imwe chete, iyo FAW-Volkswagen Audi A3L inogona kunzi inomiririra iyo yepamusoro yechitarisiko uye inonyanya kukodzera vatengi vanoteedzera fashoni yevechidiki uye zvemitambo.